October 2014 - Page 5 of 53 - iftineducation.com
Daawo Film-ka Cusub Ee Hollywood-ka Ah Ee DEFAULT Ee Ay Somalidu Jilayso (FULL MOVIE)
iftineducation.com – Waxaa dhawaan soo baxay film cusub oo Hollywood ah kasoo ay wax ka jilayaan dhalinyaro Soomaaliyeed. Film-kaan oo mid dagaal ah ayaa la magac baxay DEFAULT. Film-ka wuxuu ku saabsan yahay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku afduubaneysa dayaarad Mareykan ah jasiiradda Seychelles. Waayadaan dambe ayaa waxaa soo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biiraysa dhanka jilitaanka aflaamta caalamiga ah gaar ahaan…
Brad Pitt oo weriye wareysi ka qaadayay ku Canduufay
iftineducation.com – Jilaaga Hollywoodka ee Brad Pitt oo xayisiin u sameynayay filimkiisa “Fury” ayaa wuxuu marti u noqday weriyaha caanka ah ee reer Mareykan Zach Galifianakis. Laakiin su’aalihii la weydiiyay Brad Pitt inta barnaamijku socday waxey noqdeen kuwo aan cajab gelin isaga, taasina waxey keentay in Brad bixiyo jawaab lama filaana.brad pitt Weriye Zach Galifianakis ayaa dhowr su’aalood oo ku saabsan…
Marxaladaha Kala Duwan Ee Jaceylku Uu Maro
iftineducation.com – Waxa jira saddex marxaladood oo kala cayiman, oo loo qaybiyo jacaylka, saddexdaas marxaladoodna hadii ay kugu kulmaana, tusaale buuxa oo sheegaya in jacayl ku hayo. Sadexdan xaaladood waxa ay kala yihiin.marxaladaha uu jaceylku Muhasho – Lust or erotic passion Soo jiidasho xanbaarsan riyaaq jacayl – Attraction or romantic passion Isku xidhaan iyo isku taamid – Attachment or commitment Waxa…
Dagaalyahanada Kurdida oo gaaray Kobani
iftineducation.com – Maleeshiyaadka Kurdida ee loo yaqaan Beshmurga oo laga keenay dalka Ciraaq ayaa gaaray magaalada Kobani ee ku taal waqooyiga Siiriya. Maleeshiyaadkan oo gacan ka helaya dalalka reer Galbeedka ayaa lagu wadaa inay kaalmeeyaan Kurdida weli ka dagaalameysa magaalada Kobani oo qarka u saaran inay la wareegaan kooxda Daacish / IS. Kurdida laga keenaya Ciraaq ayaa diyaarad looga soo qaaday…
Noocyada Dhibaatooyinka Araga Iyo Sababaha Keena
iftineducation.com – Ishu waa xubin kamida xubnaha jidhka ugu muhiimsan, waana qaybta araga u qaabilsan noolaha, hadaba indhaha aadamuhu waxay ka koobantahay guud ahaan sadex qaybood oo kala ah: Qaybta cad iyo lensiska oo iftiinka ku duwa xagga hore ee isha, Xuubka dambe (retina), oo ah xuub iftiinka dareema oo ku yaalla xagga dambe ee isha, iyo dareemeyaasha aragga (optic nerves),…
Wadanka Ugu Nolosha Wanaagsan Dunida Iyo Kan Ugu Nolosha Xun Ee Sannadka 2014 Oo Lagu Dhawaaqay
iftineducation.com – Wadanka Norway ayaa kaalinta koobaad ka galay 10 wadan ee meel lagu noolaan karo ugu wanaagsan dunida oo dil sannadkan 2014 liiska kama dambaynta ah waa sida uu faafiyay wargayska Wall Street Jornal oo kasoo baxa wadanka Maraykanka.noolasha wanaagsan Waxa u wargayskani sheegay isaga oo baadhitaan ku sameeyay diraasad ay samaysay qaramada midoobay oo ku salaysnayd sida ay u…
Shaaha Lagu Daro Liinta Oo Faaido Muhiim Ah U Leh Dumarka
iftineducation.com – Cabitaanka shaaha iyo liin-macaanta la qasto ayaa la ogaaday in ay hoos-u-dhigaan 30% kansarka ku dhaca ugaxaanta taranka haweenka sida ay ku doodeen khubaro ka tirsan Jaamacadda East Anglia ee dalka ingiriiska oo cilmi-baadhis arrintan ka samaysay. shaaha liinta Haddaba, xannuunkan oo dalka Ingiriiska sannad kasta saameeya 7,000 haween ah, kuna dila in ka badan 4,000 dumara, ayaa khubarada…
Dhismaha garoonka Muqdisho oo gabagabo maraya: Sawirro
iftineducation.com – Waxaa heer gabagaba maraya dhismaha cusub ee uu yeelan doono Terminal-ka cusub ee garoonka Aadan Cadde, kaasoo ay gacanta ku hayso shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Favori. Dhismaha cusub ee Terminalka ayaa u muuqda mid la mid ah kuwa caalamiga ah, iyadoo tallaabadani ay qeyb ka tahay horumarada ay Dowladda Turkiga ka wato Somalia, gaar ahaan…
Madaxweyne Xasan Sh oo furay shirka Baydhabo: Sawirro
iftineducation.com – Madaxwayanaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ayaa furay shirka maamul u sameynta Koonfur Galbeed, kaasoo ay ku midaysan yahiin gobalada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Furitaanka shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, Wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, ergo ka kala…
Daawo Obama oo daawaday video gabar soomaali soo duubtay
iftineducation.com – Gabar soomaali ah Oo ka xanaaqday duqeenta reer falastiin ayaa fariuin adag u dirtay madaxweynaha dalka Maraykanka iyada oo ku canaanatay taageeradiisa Israil. Gabadhan ayaa waxa ay ka hadlaysay arima xanaaq ku beeray oo ku saabsan qaabka uu Obama u wajahay arinta reer falastiin iyada oo u sheegtay in looga baahan yahay in uu iska aamuso ama uu xaqa…